လိုင်းပေါ်က ချစ်သူက တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်လာဖို့ ခေါ်လို့ သွားခဲ့ရာက . . ချစ်သူကို မတွေ့ရဘဲ . .သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေး – Maharmedianews
November 7, 2019 November 7, 2019 admin555
သူဘယ်​မှာ​နေလဲ ဘယ်​ကလာလဲမသိဘူးရှင့်​ ကားဂိတ်​မှာ လဲ​နေလို့ ​အိမ်​​ခေါ်လာတာပါ ​နေမ​ကောင်းလို့ ​ဆေးရုံပို့​ပေးတယ်​ တက်​နိုင်​သ​လောက်​ အ​ပေါင်းသင်း​တွေနဲ့ပြုစု​ပေးတယ်​ မနက်​ကိုးနာရီ​လောက်​ကျ​တော့ မသက်​သာလို့ ပြန်​ပြ​ပေးတယ်​
​ဆေးရုံတင်​ရမယ်​​ပြော​တော့ ကိုလဲဒီလိုဖြစ်​မယ်​မထင်​လို့ ဘယ်​ကမှန်း​တော့မသိဘူးဆရာရယ်​ သူ့ကိုသက်​သာ​အောင်​​ဆေး​လေးထိုး​ပေးပါလား သက်​သာရင်​ လမ်းစရိတ်​​လေး အလှူခံပီးပြန်​လွှတ်​မယ်​​ပေါ့ပြန်​​ခေါ်လာတယ်​
​နောက်​ဆုံးမသက်​သာ​တော့ ပရဟိတအဖွဲ့နဲ့ဆက်​ပီး ​ဆေးရုံတင်​တယ်​ တစ်​ချို့ကကျွန်​မကိုတရားခံ စစ်​သလို ​တွေ ​မေးလာ​တယ်​နှလုံး​ရောဂါလား အ​မောဆို့တာလား အစာဘဲပြတ်​တာလား ရင်​ကွဲနာကျတာလားဆိုတာ​တော့ ဟုတ်​ကဲ့ ကျွန်​မဆရာဝန်​မဟုတ်​ဘူးရှင့်​ အဲ့ဒါ​ကြောင့်​​ဆေးရုံပို့​ပေးတာပါ​နော်​
ခုလိုတင်​တာလဲ သူ့မိသားစုနဲ့အဆက်​သွယ်​​လေးများရမလားလို့ ပီး​တော့ ​ခေါ်လိုက်​တဲ့​ကောင်​မသိ​စေချင်​လို့ပါ ကျွန်​မနဲ့မဆိုင်​ပါဘူး ကိုနဲ့မသိတဲ့လူတစ်​​ယောက်​ကို လူသားချင်းစာနာလို့ကူညီ​ပေးတာပါ
ဒါ​ပေမယ့်​ကိုဖြိုး​​လေး​ရေ ရှင့်​ကို ​အော်​လိုက်​တဲ့အတွက်​စိတ်​ထဲမှာ မ​ကောင်းဘူး မိန်းမတစ်​​ယောက်​အတွက်​နဲ့ ဘဝပျက်​ခံပီးလိုက်​လာတဲ့ရှင့်​ကို ကိုယ့်​​မောင်​​လေးလို ဂရုနာ​ဒေါသနဲ့​အော်​လိုက်​တာပါ နင်​စဉ်းစားဥာဏ်​ မရှိဘူးလား ဦး​နှောက်​မရှိဘူးလားလို့​ပြောလိုက်​မှိတယ်​ မကြီးရယ်​ ကျွန်​​တော့ကို​အော်​လိုက်​တာဗျာတဲ့ တကယ်​စိတ်​မ​ကောင်းဘူး ကိုဖြိုး​လေး​ရေ
ဒါတွေက သူ့ဆီက တွေ့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ. . .သူ့ကောင်မလေးအတွက် နားကပ်လုပ်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဒါက သူ့ရဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က ချစ်သူပါ. . . အဲ့ဒီမိန်းမက​လိုင်း​ပေါ်မှာ​တွေ့လို့သူ့ကို လာခဲ့ပါဆိုပြီး​ခေါ်လိုက်​တာ ဒီ​ရောက်​​တော့ေ​ရှောင်​​​နေတယ်​ ​ကောင်​​လေးက ဘယ်​မှမသွားတက်​​တော့ လမ်းမှာလဲ​နေတာနဲ့အမတို့က​ခေါ်ပီး ​ဆေးရုံပို့ထားတာ ဒီမနက်​ဆုံးသွားပါပြီပီ
ဒါက နောက်ဆုံး သူရေးခဲ့တဲ့ စာလေးပါ. . .
မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဘာကြောင့် ဒီလောက်ယုံကြည်ရတာလဲ မော်လေးရယ်. . .ပြီးတော့ အချစ်အတွက်နဲ့ အသက်သေ၇တာတော့ မတန်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်
ခုတော့ ကိုဖြိုး​လေးဟာ ၇ရက်​၁၁လ၂၀၁၉ စပ်​စံထွန်း​ဆေးရုံတွင်​ကွယ်​လွန်​သွားပါသည်​ မိဘ ညီကို​မောင်​နှမများအားမသိရပါ ​ကျေးဇူးပြု၍ share ​ပေးကြပါ
May La Min
← ဘင်္ဂါလီ နဲ့မြန်မာ နိုင်ငံသားများကို လူကုန်ကူးမှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ တရားခံ သန်းကြွယ်သူဌေးကို ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီး
မိန်းကလေးဖြစ်ပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ တာဝန်ကို လက်လွှဲယူကာ အန္တရာယ်များလှတဲ့ အလိုင်းမင်းအလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ မကျော့ရွှေစင် →